Trump : Ruushka ha u diyaar garoowo gantaalka aan Suuriya kusoo gamayno - BBC News Somali
Trump : Ruushka ha u diyaar garoowo gantaalka aan Suuriya kusoo gamayno
Image caption Maraykanka iyo Ruushka oo isku hardiyay Suuriya
Trump ayaa wacad ku maray in jawaab adag ay ka bixin doonaan wixii dhacay.
Qoraalkiisa Twitterka Trump wuxuu Assad ku tilmaamay "Xayawaan heysta hubka kiimikada".
Mareykanka oo ku cadaadinaya Ruushka joojinta taageerada Bashar Al- Asad
Madaxwayne Assad oo sheegay in duqaynta bariga Ghouta ay sii socon doonto
Duqeymo wali ka socda Suuriya kadib xabad joojintii golaha ammaanka
Sabtidii dad u dhaqdhaqaaqa mucaaridka Suuriya, kooxaha dad badbaadiya iyo hay'addaha gargaarka ayaa sheegay in magaalada mucaaridka ay heystaan ee Douma oo ku taalla bariga gobolka Quuta in ciidammada dawladda soo weerraray iyagoo isticmaalayo sunta kiimakada ah.
Arbacadii Ha'yadda caafimaadka adduunka ayaa waxay codsatay in loo ogolaado galitaan si ay u soo hubiyaan wararka sheegaya in 70 ruux ay ku dhinteen halkaasi, kuwaas oo ay ka mid yihiin 43 qof oo la arkay ay la luudayaan sunta kiimikada.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in wararka sheegaya in Suuriya lagu weerraray sunta kiimikada ay tahay mid lagu daandaansanayo in la xumeeyo xiriirka xooggan ee u dhaxeya Suuriya iyo
Maxaa xiga oo dhici doonna?
Madaxweyanaha maraykanka Donald Trump ayaa hakiyay booqashadiisi ugu horreysay uu ku tegi lahaa Latin America balse arrintaasi waxaa ay u wecisay inuu diiradda saaro arrimmaha Suuriya.
Go'aankaasi ayaa soo jeedinayaa falcellinta maraykanka ee suuriya ee isugu jiro howlgalka dhanka circa ah, sida uu sheegayo wariyaha BBC Washington Barbara Plett Usher.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel macron ayaa waxaa uu sheegay in duuqaymaha lala beegsan doono hoowlaha hubka kimikada ee dowladda Suuriya.
Balse wargayska the Times ayaa kusoo warramaya in ra'iisul wasaaraha Britain Therese May ay ugu baaqday madaxweyne trump in uu caddaymo dheeraad ah bixio si loo iftiimiyo eedeymaha dowladda suuriya ee ah weerarka hubka kimikada ee magaalada Douma.
Safiirka Ruushka u fadhiyo qaramada midoobay Vasily Nebenzia ayaa ugua digay xukuumadda Washington inay mas'uuliyadda ay duusha saran doonan tallaabo kasto oo millitari ay qaadan.
Maaliinkii talaadada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku guuldaraystay inuu ansixiyo qaraar soo jeedinaayo in la unko koox baaritanno ku samayso weerarka Suuriya.